Man United Ma Lahan Hogaamiye, Harry Maguire Iyo Bruno
By axadle	 On Nov 25, 2020
Halyeeyga Manchester United Rio Ferdinand ayaa sheegay in kooxda aysan laheyn wax hogaamiye ah islamarkaana Harry Maguire iyo Bruno Fernandes aysan u qalim kabtanimo.
Mesut Ozil ayaa ku dhawaaqay lambarka uu ku leeyahay Twitter-ka
Hadda waxaa la joogaa waqtigii uu macsalaameyn lahaa Mesut Ozil
Red Devils ayaa si gaabis ah ku bilaabatay xilli ciyaareedka Premier League iyagoo badiyay afar ka mid ah sideedkulan oo ay ciyaareen, waxayna ku jiraan kaalinta 10aad ka dib markii ay ka soo gudbeen kooxda West Brom Sabtidii.
Fernandes ayaa dhaliyay goolka rigoorada ee ay Man United kaga badisay West Brom.
Kabtankii hore ee Manchester United ayaa si xun u dhaleeceeyay ciyaartoyda Ole Gunnar Solskjaer isagoo sheegay in kooxda koowaad uusan ku jirin shaqsi hogaamiye noqon kara.
Ferdinand ayaa u sheegay BT Sport: “Waxaan maalin dhaweyd daawaneynay kulankii West Brom.
“Kaliya ma ahan inuu Ole ka soo hadlo kursiga keydka, ama Mike Phelan ama Michael Carrick inay ka soo hadlaan kursiga keydka, laakiin waxaad mararka qaar u baahan tahay ciyaaryahan.
“Bruno waa hal abuurka kooxda laakiin waxba looma arko marka uu kubada dhiibto, afar jeer ayuu kubada dhiibtay ka hor waqtigii nasashada ee kulankaas.
“Waxaan eegay ciyaartoyda kooxda iyo shaqsiga ku canaanan doona Fernandes kubad dhiibashada badan ee uu sameynayo. Kumaa u sheegi kara qaladaadkiisa? Waan ku qeylin lahaa aniga.”
Gary Lineker ayaa xusuusiyay Ferdinand in kabtan Maguire iyo xiddiga khadka dhexeee Portugal Fernandes inay yihiin hogaamiyayaasha qolka labiska United laakiin Ferdinand waa uu ka biyo diiday.
Wuxuu hadalkiisa raaciyay: “Haddii aan daacad u hadlo uma maleynayo inay hogaamiyayaal yihiin, midkoodna kama muuqdo calaamadihii hogaamiye lagu noqon lahaa.
“Malaha Bruno ayaa laga yaabaa oo ah ciyaaryahan cusub oo qaatay mas’uuliyada wareysiyada iyo inuu garoonka dhexdiisa ku dalbado kubada, islamarkaana mas’uuliyad sidaas ku qaada laakiin ma arko qof canaanaya ciyaartoyda ama dhinac u la baxaya kuna dhahaya ‘dhageyso, waxaad kubada dhiibatay dhowr jeer, iska bedel sidaasi.’
“Inaysan taageerayaal joogin garoonka waa wax laga xumaado laakiin waxay ii furtay indhaha oo waxaan arkay in hogaamiyayaal badan aysan ciyaareynin kubada cagta waqti xaadirkaan, Man United-na taas ayay la dhibtooneysaa.”
Jack Wilshere Oo Ka Hadlay Bahdilka Uu Mikel Arteta U
This Weight-reduction plan Is Harmful for Your Bones, New Study Finds